Muhiimada ay leedahay summaynta eCommerce | Wararka ECommerce
Muhiimadda summaynta eCommerce
Ganacsiyo badan oo elektaroonig ah ayaa ka furmaya internetka oo wax iibinaya. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo xaqiiqda ah in ay jiraan wax badan oo eCommerce ah, runtu waxay tahay in kaliya in yar oo taagan, kuwa arkay muhiimadda iyo faa'iidooyinka calaamadaynta. Faahfaahinta marka alaabta laga soo raro shirkadaha sida Cajacartonembalaje.com Baakadaha gaarka ah, waayo-aragnimada isticmaale, iwm… Dhammaan tani waa furaha lagu samaynayo macaamiishu inay dareemaan in la jecel yahay.
Laakin waa maxay sababta sumadeynta ay muhiim u tahay? Sideed ku horumarin kartaa eCommerce? Waxan oo dhan hoos ayaan kaagala hadli doonaa.
1 Waa maxay calaamadaynta
2 Sida loo horumariyo summaynta eCommerce-ka
2.3 Khibradda adeegsadaha
2.4 Falanqee oo xalli
Waa maxay calaamadaynta
Erayga summaynta waxa uu ka yimid Ingiriis, waana eray suuqgeyn loo isticmaalo. maxaa loogu talagalay? Waa hagaag waxa ay diiradda saaraysaa dhis sumad adag adiga oo samaynaya istaraatiijiyado taxana ah si aad u soo jiidato, u hayso oo aad macaamiisha ugu hayso astaantaas.
Dabcan, tani waa geeddi-socod dheer, taas oo aan ku saleysneyn oo kaliya soo jiidashada macaamiisha si ay kaaga iibsadaan, laakiin sidoo kale samaynta astaanta (ama kiiskan eCommerce) la aqoonsaday, la aqoonsaday iyo in ay ka dhigayso qiyamkeeda wax walba. samee Haddi ay noqoto mareegaha, dhacdo, marka aad wax iibsanayso, la socodka, iwm.
Si kale haddii loo dhigo, waxaanu kuu sheegaynaa waxa ku saabsan suurtagalnimada sumad, shirkad ama badeecad ay ku kala soocaan, wax sii adkaanaya sababtoo ah waxay u muuqataa in wax walba la hindisay. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaanshiyahaasi wuxuu ku imaan karaa waxa uu yahay qiimaha, gaarka ah ee astaanta, kalsoonida ama khibradda isticmaalaha ee la siiyo macmiilka.
Tusaale ahaan, qiyaas inaad haysato ciyaarta fiidyaha eCommerce. Macmiil ayaa u yimi boggaaga oo waxa uu ku riday ciyaarta fiidyaha. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan dhamaystirin iibkii, saacado ka bacdi, macmiilkaas waxa u soo diray email-ka oo lagu weydiinayo sababta uu u agoomoobay ciyaartaas muuqaallada ah, isagoo wata "rajo iyo dhalanteed" uu u soo galay guri si uu ugu raaxaysto isticmaalaha. ugu badnaan qoyska. Ugu yaraan, iimaylkaas ayaa soo jiidan doona dareenka oo haddii aad dareento, way iibsan karaan.
Laakiin haddii lagu daro iibsashada, waxaad u xirtaa hab shakhsi ahaaneed (ka baxsan sanduuqa caadiga ah ama baqshadda brown) oo bixi faahfaahin kala duwan oo ku saabsan eCommerce kaaga, marka xigta ee aad rabto inaad iibsato ciyaar fiidiyoow ah, ikhtiyaarka ugu horreeya ee uu doono fiiri waxay ku jiri doontaa dukaankaaga, inkastoo aad ka yara qaalisan karto kuwa kale.
Waa maxay sababtu? Hagaag, sababtoo ah calaamadaynta ayaa ku siinaysa sii shakhsiyadda astaantaada oo ka dhig macaamiishu inay ku kala saaraan waxayna kaa door bidaan waxaad siiso oo aanay dadka kale siin.
Sida loo horumariyo summaynta eCommerce-ka
Ilaa dhowaan waxaa loo maleynayay in calaamadeynta ay tahay arrin u gaar ah shirkadaha, ama calaamad shakhsi ah. Laakiin taasi eCommerce-ka tani xidhiidh badan kama lahayn. Qalad weyn.
Sidaan horay u aragnay, kala duwanaanshuhu waa qiimaha ay tahay in la wanaajiyo si macaamiishu u doortaan inay wax ka iibsadaan dukaankaaga internetka ka dhanka ah tartanka. Oo, tan, waxaad samayn kartaa waa kuwan soo socda:
Mid ka mid ah Aragtida ugu horreysa ee ah in macaamilka eCommerce-ka uu la yeelanayo xiriir la leh baakadaha meesha aad u dirto alaabta aad soo iibsatay.
Taasi waa, website-kaagu waa aragtida ugu horreysa, laakiin midka dhabta ah ee tirinta ayaa ah mid jireed, waqtiga aad hesho xirmada.
Oo hadda waxaan ku weydiinaynaa, maxaad jeclaan lahayd in ka badan, sanduuq brown ah oo lagu shaabadeeyey cajalad cad iyo faahfaahintaada? Mise sanduuq cagaaran oo leh dhibco buluug ah iyo sumad casaan ah, oo ay weheliso qaanso huruud ah oo ku taal sanduuqa? Haa, kan labaad wuxuu noqon lahaa mid aad u xiiso badan, inkastoo midabadu aysan ku dhejin xitaa rinjiga, waxaad xasuusan doontaa baakadahaas.
In ka badan haddii aad ka furto gudaha oo si lama filaan ah alaabta aad soo iibsatay, iyada oo aan loo eegin sida ay u sahlan tahay, waxay timaaddaa duub ama faahfaahin.
Kaliya wakhtiga aad ku maalgelisay waxay ka dhigi doontaa macmiilka inuu dareemo muhiim, sababtoo ah waxaad xiisaynaysay inaad shakhsiyayso badeecada oo aad aqoonsato sumaddaada xitaa marka aysan internetka ahayn booqashada shabakada. Kaliya ma aadan gelin sanduuqa waana taas.
In kasta oo aanu hore idiinku sheegnay in shabkadu aanay sidaa u sii muhiimsanayn, haddana runtu waa sidaas. Websaydh fool xun maaha inay macaamiishu kaa iibsadaan, kaliya kuwa ku yaqaana ayaa doonaya, laakiin kuwa cusubi waxay dareemayaan inay ka sii daran yihiin tartankaaga marka loo eego adiga.
Waayo, daryeesho qaab dhismeedka shabakada ma aha oo kaliya garaaf ahaan laakiin sidoo kale meelaynta, waa sida ama ka muhiimsan mawduucyada kale.
Ecommerce-kaagu wax faa'iido ah kuuguma jiro haddii aanad macaamiil lahayn. Oo si aad u hesho, ma sugi kartid inaad daabacdo bogga oo ay ku soo gaaraan. Waa lagama maarmaan in la sameeyo istaraatiijiyad lagu soo jiidan karo, iyada oo loo marayo meelaynta, shabakadaha bulshada, bixinta xayaysiinta, iwm.
Hadda, mar haddii aad haysato macmiilkaas, maxaad uga welwelin isaga? Laga soo bilaabo waxa ay dhadhaminayaan inay bixiyaan alaabada la xidhiidha, sida khibrada wax iibsiga ay ahayd iyo haddii ay kugula talin lahaayeen dadka kale.
Waxaas oo dhan waxay qofkaas ka dhigaysaa inuu ka qaybqaato dukaanka internetka laftiisa, nooc ka mid ah "safiirka" laakiin runtu waxay tahay in waxa aad helayso ay tahay in ay dareemaan in loo qaddariyo macmiil ahaan, wax, ganacsiyo kale oo badan oo elektaroonig ah, laga yaabo in aanay ka badnayn a nambarka . Bini’aadamkuna waxa uu ku celceliyaa halka uu dareemayo in la jecel yahay.
Falanqee oo xalli
Xeeladaha, iyo calaamadaynta guud ahaan, had iyo jeer maaha wax go'an. Waxaa laga yaabaa in xulashooyinka soo baxaya aysan ahayn kuwii saxda ahaa oo ay lagama maarmaan tahay in la beddelo. Tani waa wax caadi ah ilaa aad ka hesho macaamiisha aad raadineyso, oo ficilladu dhaqan galaan.
Waxaan ula jeedaa, Waa lagama maarmaan in si joogto ah loo beddelo ilaa calaamaddu ay shaqeyso iyo, ka sarreeya, in ay gaarto macaamiishaas. Markaad hesho, uma baahnid inaad sii wadato beddelka, laakiin aad xoojiso.
Marka la soo koobo, calaamadaynta waa istaraatiijiyad sii kordheysa moodada oo kaliya maahan shirkaduhu inay garteen awoodeeda, laakiin sidoo kale eCommerce laftoodu waa samaynayaan waxaana laga yaabaa inay tahay furaha aad u baahan tahay inaad awood u yeelatid inaad naftaada ka soocdo tartankaaga oo aad iska saarto. ganacsigaaga. Shaki ayaad qabtaa? Na weydii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka ECommerce » eCommerce » Muhiimadda summaynta eCommerce
Sida loo helo macaamiisha barta Youtube